Mgbe afọ 20 nke nyocha FBI ọ bụ nke gọọmentị: Saudi Arabia abụghị onye ikpe mara na Septemba 11 Nkwado ụjọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » Mgbe afọ 20 nke nyocha FBI ọ bụ nke gọọmentị: Saudi Arabia abụghị onye ikpe mara na Septemba 11 Nkwado ụjọ
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Onye isi ala US Biden enwetawo nrụgide n'ime izu ndị na -adịbeghị anya sitere na ezinụlọ ndị ihe metụtara, bụ ndị chọworo ihe ndekọ ahụ ogologo oge ka ha na -achụ ikpe na New York na -ebo ebubo na ndị isi Saudi na -etinye aka na mwakpo ahụ.
Septemba 12, 2021 nwere ike ịbụ ụbọchị dị mma maka njem nlegharị anya ụwa. N'ọgwụgwụ Satọde, Septemba 12, 2021, ndị FBI wepụtara akwụkwọ ọhụrụ edepụtara maka mwakpo ụjọ na Septemba 11, 2001 na United States.
Akwụkwọ ahụ na -akọwa kọntaktị ndị ntọ ahụ nwere ndị mmekọ Saudi na US mana ọ nweghị ihe akaebe na gọọmentị Saudi nwere nkwekọrịta na nkata ahụ.
Ndị FBI ewepụtala akwụkwọ ọhụrụ nwere peeji iri na isii nke metụtara nkwado logistical enyere mmadụ abụọ n'ime ndị na-ebuso Saudi agha ka ha na-akwado mwakpo September 16, 11.
Industrylọ ọrụ njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ anọwo na -eche ka ewepụta akụkọ FBI a ka ọ bụrụ ìhè ma ọ bụrụ na gọọmentị Saudi Arabia kwadoro ndị ohi na ndị na -eyi ọha egwu na Septemba 11, 2001.
Ihe kpatara ya: Saudi Arabia na -akwado nkwado na nso nso a wee nye onye ndu maka njem nlegharị anya ụwa.
Onye nkwụsị nkwụsị na -akwado na nghọta Ebumnuche Saudi Arabia maka nkwado ya nke ukwuu maka njem nlegharị anya n'oge na-agaghị ekwe omume na-agabiga ọrịa COVID-19 gụnyere igwe ojii nke ihe ịga nke ọma. Mkpesa ndị a na -akawanye njọ kwa ụbọchị na -eduga na ncheta afọ 20 nke mwakpo ụjọ nke Septemba 11.
N'otu aka ahụ mgbe ijeri mmadụ n'ụwa chetara afọ iri abụọ ka ọnwa Septemba 20 gachara, onye isi ala US Biden kara akara nke ikpeazụ maka mmeri a n'ịwepụta akwụkwọ nyocha FBI na ọrụ Saudi Arabia - ọ bụrụ na ọ dị.
Setpember 12 mgbe Septemba 11, 2001 bụ ụbọchị nke ịdị n'otu na United States na ụwa mepere anya
Ụwa gbanwere maka United States na Septemba 12,2001 n'ịchịkọta obodo na ụwa ọnụ na Septemba 12, ụbọchị na -esote Septemba 11.
Taa, echetara ndị America na America ga -ebili ọnụ ọzọ. US taa nwere ụtọ etu obodo a ga -esi ka mma ma ọ bụrụ na ndị mmadụ achọta ụzọ ha ga -esi dịrị n'otu ọzọ.
Mwepụta akwụkwọ FBI abụghị naanị ọmarịcha usoro mba ofesi, kama ọ bụ ihe dị mkpa na usoro ọgwụgwọ n'ụlọ.
Ekwesịrị ịmara, afọ 20 gara aga ndị Taliban rịọrọ United States ka ọ ghara ịwakpo Afghanistan. Enweghi usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị butere agha afọ 20, na ụjọ maka ụjọ karịa taa.
Akwụkwọ nyocha nke FBI wepụtara na mbubreyo taa, Septemba 11,2021 na -akọwa kọntaktị ndị ntọ ahụ nwere ndị mmekọ Saudi na United States mana ọ nweghị ihe akaebe na gọọmentị Saudi nwere nkwekọrịta na nkata ahụ.
Ọ bụ ndekọ nyocha mbụ a ga -ekpughere kemgbe Onye isi ala US Joe Biden nyere iwu ka a na -enyocha nyocha nke ihe na -anọghị n'ihu ọha.
Ọ dịla anya gọọmentị Saudi gọnarịrị itinye aka ọ bụla. Ndị nnọchi anya Saudi na Washington kwuru na Wenezde na ọ na -akwado ịkọwa ọkwa nke ndekọ niile ka ọ bụrụ ụzọ iji "kwụsị ebubo na -enweghị isi megide alaeze otu ugboro".
Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ebubo ọ bụla na Saudi Arabia na -agbakọ aka ọnụ "bụ ụgha kpamkpam".
Gọọmentị Saudi Arabia gọnarịrị izipu ego na mmadụ abụọ n'ime ndị omekome Septemba 11, Khalid al-Mihdhar, n'aka ekpe, na Nawaf al-Hazmi
Onye isi ala US Biden n'izu gara aga nyere iwu ka Ngalaba Ikpe Ziri Ezi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ mee nyocha nyocha nke akwụkwọ nyocha wee wepụta ihe ha nwere ike n'ime ọnwa isii na -abịa.
E wepụtara ibe 16 n'abalị Satọde, awa mgbe Biden gachara emume ncheta Septemba 11 na New York, Pennsylvania na north Virginia. Ndị ikwu nke ndị ihe a mere mbụ jụrụ na ọnụnọ Biden na emume ma ọ bụrụhaala na akwụkwọ ahụ ka bụ nkewa.
Ndekọ edezigharị nke ewepụtara na Satọde na -akọwa ajụjụ ọnụ a gbara mmadụ 2015 na onye na -achọ akwụkwọ ikike ịbụ nwa amaala US na afọ ole na ole gara aga, ya na ụmụ amaala Saudi na -emekọrịta ihe ugboro ugboro, ndị nyocha kwuru na -enye ọtụtụ ndị ohi ahụ "nkwado ngwa agha".
Ọchịchị Biden n'ọnwa Febụwarị wepụtara nyocha ọgụgụ isi nke na-emetụta Onye isi ala Mohammed bin Salman na ogbugbu 2018 nke onye nta akụkọ nọ na United States Jamal Khashoggi mana ọ nwetara nkatọ sitere na ndị Democrats maka izere ntaramahụhụ ozugbo nke onye isi ala.
Banyere Septemba 11, enweela ntule nke itinye aka na gọọmentị kemgbe obere oge mwakpo ahụ gasịrị, mgbe ekpughere na mmadụ iri na ise n'ime mmadụ iri na itoolu ahụ bụ ndị Saudis. Osama bin Laden, onye ndu al-Qaida n'oge ahụ, sitere n'ezinụlọ a ma ama n'alaeze ahụ.
US nyochara ụfọdụ ndị nnọchi anya Saudi na ndị ọzọ nwere njikọ gọọmentị Saudi ndị maara ndị na -apụnara mmadụ ihe mgbe ha rutere US, dị ka akwụkwọ ndị akọwapụtabeghị.
Agbanyeghị, akụkọ 9/11 Commission hụrụ “enweghị ihe akaebe na gọọmentị Saudi dị ka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị isi Saudi n'otu n'otu kwụrụ ụgwọ”Mwakpo ndị al-Qaeda chepụtara. Mana kọmịshọna ahụ kwukwara “ọ nwere ike” nke ndị ọrụ enyemaka gọọmentị Saudi na-akwado mere.
Nleba anya nke ọma gbadoro anya na mmadụ abụọ mbụ tọọrọ na Nawaf al-Hazmi na Khalid al-Mihdhar. Na February 2000, obere oge ha rutere n'ebe ndịda California, ha zutere n'otu ụlọ oriri na ọ halaụlụ halal nwa amaala Saudi aha ya bụ Omar al-Bayoumi onye nyere ha aka chọta ma gbazite ụlọ na San Diego, nwere njikọ na gọọmentị Saudi ma nweekwa mmasị na nyocha FBI na mbụ. .
Qatar Airways gbara ụgbọ elu Lagos ugboro abụọ